ပင်မစာမျက်နှာ > January,2018 > jan8.1
တောင်သူလယ်သမား၊ လုပ်ငန်းရှင်များသို့ မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ
နှစ်တို/ ရှည်ချေးငွေ ထုတ်ချေးပေးသွားမည်
မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင် လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နေသောတောင်သူ လယ်သမားများအတွက်လိုအပ်သော လုပ်ငန်းသုံးစက်ကရိယာများ ဝယ်ယူနိုင်ရေးအတွက် အများဆုံး ကျပ်သိန်း (၂၀၀)ထိ နှစ်တိုချေးငွေကို (၃)နှစ် (၃)ရစ် ဖြင့်လည်း ကောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးကဏ္ဍ ပို့ကုန်မြှင့်တင်ရေးနှင့် သွင်းကုန်အစားထိုး ကုန်ထုတ် လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသည့် လုပ်ငန်းရှင်များ၊ လုပ်ငန်းရှင် အဖွဲ့အစည်း/ ကုမ္ပဏီများ အတွက် လိုအပ်သော အရင်းအနှီးများ ထုတ်ချေးရန် အများဆုံး ကျပ်သိန်း(၅၀၀၀)နှစ်ရှည်ချေးငွေကို (၅)နှစ် (၅)ရစ် ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ထုတ်ချေးပေးနိုင်ရန် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်နှင့် ညှိနှိုင်းထားရှိပြီး ဖြစ်ပါ၍ အဆိုပါ စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေးကဏ္ဍများအတွက် ချေးငွေလျှောက်ထားလိုသည့် တောင်သူ လယ်သမားများနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် ချေးငွေဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း သိရှိနိုင်ရန် အသိပေးအပ်ပါသည်-
(က) စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော တောင်သူ လယ်သမားများအတွက် လိုအပ်သောလုပ်ငန်းစက်ကိရိယာများ ဝယ်ယူနိုင်ရေး ထုတ်ချေးရန်၊ အများဆုံး ကျပ်သိန်း (၂၀၀) နှစ်တိုချေးငွေ (၃) နှစ် (၃) ရစ်။
(ခ) စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးကဏ္ဍ ပို့ကုန်မြှင့်တင်နိုင်ရေးနှင့် သွင်းကုန်အစားထိုး ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးအခြေခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသည့်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ လုပ်ငန်းရှင် အဖွဲ့အစည်း/ ကုမ္ပဏီများ အတွက် လိုအပ်သောအရင်းနှီးများထုတ်ချေးရန်၊ အများဆုံးကျပ် သိန်း (၅၀၀၀) နှစ်ရှည် ချေးငွေ (၅) နှစ်၊ (၅) ရစ်။
(ဂ) အာမခံတင်သွင်းရန် ပုံစံ(၇)မူရင်း၊ (၁၀၅)မူရင်း ချေးငွေ၏ ၁၀% စုဆောင်းငွေ၊ ချေးငွေဖြင့် ဝယ်ယူသည့် လုပ်ငန်းသုံးစက်ကိရိယာများ၊ ချေးငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများ၊ အဆောက်အအုံများ၊ ဘိုးဘွားပိုင်မြေဂရန်မြေ၊ အာမခံတင်သွင်းသော ပစ္စည်းများအတွက် Special Power နှင့် အာမံတင်သွင်းသော ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ကြောင်း တရားရုံးကျမ်းကျိန်လွှာ၊ ဘဏ်ရာဖြတ်နှင့် ဘဏ်အာမခံတို့ အစီရင်ခံစာ၊ အာမခံ ပေးမည့်သူ (၂) ဦး၊
(ဃ) အာမခံအဖြစ်တင်သွင်းသည့် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းများပေါ်တွင် မြန်မာ့ အာမခံလုပ်ငန်း၌ မီးအာမခံထားရှိရမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းမှ ဆောင်ရွက် သည့် အခြားအာမခံအမျိုးအစားများကိုလည်း အာမခံထားရှိရမည်။ (ဥပမာ- ကျွဲ/ နွား အာမခံ၊ သီးနှံအာမခံ)
(င) တောင်သူလယ်သမားများအတွက် ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ချေးငွေစိစစ်ရေးအဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်၊ လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက် ၊ လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သောဌာနများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ အသင်းချုပ်၏ ထောက်ခံချက်။ (ဥပမာ- စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်း အင်းဦးစီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်၊ ကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ် ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်၊ ငါးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် ……စသည်ဖြင့်ပါရှိရမည်။)
(စ) လုပ်ငန်းရှင် အဖွဲ့အစည်း/ ကုမ္ပဏီများမှ ဘဏ်သို့တင်သွင်းရမည့် စာရွက်စာတမ်း ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊ သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းနှင့် သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းများ၊ Form 6. Form 26 နှင့် (Form 6. Form 26 သည် မှတ်ပုံတင်ပြီးဖြစ်ရမည်) ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (ငွေချေးယူရန်နှင့် ဘဏ်သို့တင်သွင်းသည့် အာမခံပစ္စည်းများကို သဘောတူညီကြောင်း ဆုံးဖြတ်ချက်၊ တင်သွင်းမည့်အာမခံ ပစ္စည်းစာရင်းနှင့် တန်ဖိုး ကုမ္ပဏီပိုင်နှင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ပိုင် ဖြစ်ရမည်)၊ ချေးငွေကို မည်ကဲ့သို့သုံးစွဲမည်ကို ဖော်ပြသည့် စာရင်း၊ စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးမှ စာရင်းစစ်အသိအမှတ်ပြုစာရင်းစစ်အရာရှိ လက်မှတ်ပါရှိသည့် ဝင်ငွေ၊ သုံးငွေ (အရှုံး/ အမြတ်စာရင်း)၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်(၃)နှစ် အတွက် ပြီးခဲ့သောနှစ် အမှန်စာရင်း၊ ယခုနှစ်ခန့်မှန်းစာရင်း၊ နောင်နှစ်မျှော်မှန်းစာရင်း၊ တစ်ဆက် တစ်စပ်တည်းဖြစ်သော ပြီးခဲ့သည့်(၃)နှစ်အတွက် အခွန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ပြေစာများ၊
(ဆ) ငွေ (၁၀၀)ကျပ်လျှင် အတိုး ၉ %၊ ဝန်ဆောင်ခ Service Fee ၁ %၊
(ဇ) သွင်းကုန်အစားထိုးကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ပို့ကုန်မြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများအား ဦးစား ပေးချေးရန်၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများတိုးချဲ့ခြင်း၊ (ကျွဲ၊ နွား၊ ဆိတ်စသည့် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းကို အစပျိုးထုတ်ချေးမည်ဖြစ်)၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် နှစ်ရှည်ပင် ဖြစ်သည့် ကျွန်း၊ ရော်ဘာစိုက်ပျိုးရေးအတွက် မထုတ်ချေးပါ၊ ဝယ်ရောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ မချေးသေးပါ။
(စျ) ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလဆန်းမှ စတင်ထုတ်ချေးမည်ဖြစ်၊ ချေးငွေညွှန်ကြားစာအား ဖြန့်ဝေမည်ဖြစ်ပြီး၊ ငွေချေးလိုသူများဖြင့် မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်(မြစ်ကြီးနား) သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါကြောင်း ပြည်သူများသို့အသိပေးအပ်ပါသည်။